Ku xir khadadka Microstation Geographics - Geofumadas
Halkan waa hibo loo yaqaan dadka isticmaala Microstation, taas oo ka soo baxday dhammaadka fasalka todobaadkan.
Shaqada aan ka tagay ardaydu waxay ahayd inay soo saaraan dhammaan hydrology on xaashida kartootada: webiyada, dooxa, laguna ...
Qaar waxay soo qaadeen "line lines smart" iyaga oo aan la wadaajin, sidaas darteed dhamaadka waxay lahaayeen xarfo badan oo dabacsan.
Sidaa darteed waxaan u adeegsaneynaa amarka "isku xirka shaqada," kaas oo ka yimid menu "qalab, juquraafi, abuurka" "inkasta oo Bentley Map XM ay ka timaaddo" topology nadiifinta "
Sidaa darteed, xayndaab ayaa la abuuray dhamaanba meesha ay isbedelka la rabo, ka dibna amar ayaa la furfuraa oo guji ayaa lagu sameeyaa gudaha xayndaabka.
iyo diyaarka, natiijada waxay tahay in ay u weheliso dhamaan walxaha qumman ee u dhexeeya qotomiska oo u beddelaa linearings ama polylines.
Dabadeedna, ujeedada udubdhiga polylines waa gacanta waa amar "abuuro silsilado adag"
Ah, habkan, waa in la sameeyaa ka dib markii nadiifinta fayaqabka, ugu yaraan kala-soocida ee isgoysyada.
Ka dibna si loo hubiyo in aysan jirin waxyaabo qariib ah, maaskuluska qoryaha ayaa lagu dhaqaajiyaa in rinjiyeyaasha ku jira midabyo kala duwan si ay u arkaan arag ahaan.
Post Previous«Previous Manifold GIS; Dhisidda iyo Editing Qalabka
Post Next Bentley waxay tartameysaa ardaydaNext »
4 Jawaab ah "Khadadka Xirfadaha leh Microstation Geographics"
Dabcan, XM ayaa keena. Caddaynta, oo ay lahaan jirtay Microstation Geographics, waa hanti Khariidadda Bentley.
Nooca caadiga ah ee Microstation XM ma hayo.
Waxay ku taallaa Qalabka Noolaha Nadiifinta, sida lagu muujiyey
Vangelis isagu wuxuu leeyahay:
hello! sida aan doonayo in aan ogaado haddii puedde isticmaali khadadka xidha in XM waxa dhacaya esque Waxaan leeyahay geographics ordaya on mashiinka XP laakiin XM si aad u aragto mashiinka oo kale oo doonaya in ay ogaadaan sida ay u xirmaan sadarro dhawr ah ee u dhigma XM ah in ay ku xidhmaan XM khadadka in salaanta !!!!
Mariana G. isagu wuxuu leeyahay:
Haddii aad xiiseyneyso is-weydaarsiga xiriirka (tiknoolajiyada, kombiyuutarka, xiriirka) la soo xiriir link.exchange.mariana@gmail.com
Waxaan u mahadcelin doonaa qofkii i caawimi kara inaan helo waxyaabaha soo socda.
Cabbiraadyada cabbirada cabbirka ee goobaha xaddidan iyo jajabyada jajabka.
TIN la dhisay mid ka mid ah barnaamijyada la xiriira Microstation
Khadadka asaliga ah
Jaangooyooyinka heerkulka ah ee aan haboonayn.
Cabbirka mashruuca wuxuu noqon karaa dhowr kun oo dhibcood, inta u dhaxaysa dhibcooyinka xaddidan iyo dariiqyada jajabyada. Marka laga eego dhulka, way ka sii adag yahiin, ka sii fiican.
Maadaama mashiinka Microstation uu yahay 2 version (ha qoslin, fadlan), waan ku faraxsanahay haddii xogta la keenay ASCII faylasha. Nidaamka wuxuu noqon karaa mid kasta, haddii feylka si cad loo calaamadiyo oo la socdo sharaxaad gaaban.
Waan fahamsanahay in aan codsanayo raalli weyn. Laakiin waxaan u baahanahay daraasad isbarbardhiga ah oo aanan ii keeneynin wax bir ah oo khafiif ah. Anigu waxaan qirayaa qaddarinta ku soo gebogabaynta maqaalkii ugu danbeeyay ee soo sheegi doona natiijada maqaalkan.